Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Oromoo fakkaatanii Jawaar fi OMN'n Cabsuun Haa Dhaabbatu.
Oromoo fakkaatanii Jawaar fi OMN'n Cabsuun Haa Dhaabbatu.
Raachi hanga ofii hin beekne uttaalaa fuulatti nama dhufti jedhama. Dhugaa namaa hin awwaalinaa, dhugaa teessantu awwaalama waan ta'eef. Nama tokko nama ta'uu isaaf hin jibbin, hojii isaa jibbi malee. Dhugaa dubbachuuf Jawar Mohammed qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qaba. Kana Oromoo miti diinnuu ragaa ni bahaaf. Keesumaayyuu FXG woyyaanee kuffisuuf qopheesse keessatti gaheen Jawar ilmaan Oromoo wajjiin taphate seenaaf ummatni Oromoo waan dagatu miti.
1. Erga Jawar Mohammed ''I'm Oromo First'' jedhee woyyaaneef habashaan maraatte, Oromoon immoo bakkaa hundaa socho'e.
2. Miidiyaa OMN ummata wajjiin ijaaruu irra darbee, hogganuun isaa woyyaanee Abbaayitu gaddabamuu hafa malee OMN qilleensa irra hin jiraatu jettee si'a 15 oli uggurte, ummata Oromoo walitti fidduun qilleensa irratti deebiisuun irra aanseera. Hedduun keenya OMN har'a eega jennee hin yaadne turre. Kanarra darbee miidiyaan kuni odeeffannoo dhugaa qofa ummataan gahuuf, hayyoota Oromoon qabdu walitti fiduu danda'eera.
3. Qormaata biyyoolessaa fageenya kana irra taa'ee itti dhaadatee, seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif mootummaa haqcisiisuu danda'eera. Boodas eeyyama isa akka gaafatanii guyyaa murteessan godheera.
5.Hiriira guddichaaf labsii bittaaf gurgurtaa lagachuu hidhamtoota Oromoo mana hidhaa jiran akka Baqqalaa Garbaa wajjiin qindeessaniin, Injifannoo seena qabeessa galmeessisuu irratti gahee olaanaa taphateera.
6. Ummata Oromoo diyaasporaa, haayyoota Oromoon qabdu waggaa dheeraaf hoggansa dhabee gargar faca'e, walitti fiduun yaa'ii Londoniif Atlanta irratti riqicha tokkummaa ijaareera.
7. Miidiyaa akka facebook irratti kadhatee, ykn jaarmayaa hogganee osoo hin taane hojii qabsoo ofuma isaatii jalqabeen hordoftoota miiliyoona tokkoo oli horachuun, woyyaanee facebook biyya keessatti akka ukkaamsitu godheera. Dhugaa dubbachuuf keesumaayyuu Jawar osoo diyaasporaa keessa hin jiru ta'ee woyyaanee eenyuufuu miidiyaalee akka facebook hin uggurtu. Interneetii cufuun immoo maallaqa hedduu kasaaraa jirti.
8. Qeerroof ummata Oromoo hunda ija qixaan ilaaluun, gorsuun, xiinxalaaf tarsiimoo qabsoo kennuun ummata Oromoo bahaaf dhihaa kaabaaf kibbaa akka tokkummaan falmatan godheera. Dhugaa dubbachuuf hedduu keenya ummatni Oromoo dhalachuu keenyaa quba hin qabu, garuu Booranaaf Gujii hanga Wollootti, karrayyuuf Harargee hanga Jimmaaf Shawaatti, Arsii Baalee hanga Iluuf Wallaggaatti waa'ee Jawar Mohammed fi Baqqalaa Garbaa haasaya ummatni Oromoo. Dhaamsaaf ejjannoo isaaniitiin socho'an. Woyyaaneen har'a interneetii cufuu qofaaf guyyatti doolaara kumaatamaan kasaaraa jirti. Osoo Jawar nama isaaniif laafu taatee, osoo Jawar nama faayidaa dhuunfaaf aangoo barbaadu ta'ee woyyaaneen qabeenya biyyatti hunda Jawariif kennitee, OMNis ukkaamsitee aangoo dheereffachuu ni dandeessi ture. Jawar garuu qabsaawaa dhugaa, hayyuu Oromoon qabdu, kan diina fageenya irraa mataa cabse. Jawar nama ummata Oromoo keesumaayyuu dhaloota qubee kana qabachuun qabsoo Oromoo yeroo muraasa keessatti akka boqqonnaa haaraatti seentu taasise. Kana qofaa miti Jawar waan hedduu ummata Oromoo wajjiin hojjate. Ummata jechuun yoo hogganaa qabaate. Jawar nama bilisummaa Oromoof hin rafne. Oromoo fakkaatanii diina wajjiin Jawaar fi OMN miidiyaa sagalee ummata miiliyoona 40 olii irratti duuluun haa dhaabbatu. Jawar jabaadhu yaa gaachana Oromoo, hinaaftuuf gurra hin kennin.
Posted by Hasan Ismail at 1:57 PM